Translate lastdragere from Danish to Burmese - MyMemory
Results for lastdragere translation from Danish to Burmese
ထမ်းသောသူ ခုနစ်သောင်း၊ တောင်ပေါ်မှာ သစ်ခုတ်သောသူရှစ်သောင်း၊ အမှုကိုကြည့်ရှုစီရင်သော သူ သုံးထောင်ခြောက်ရာတို့ကို ခွဲထားတော်မူ၏။
ထမ်းရွက်သောသူခုနစ်သောင်း၊ တောင်ရိုးပေါ် မှာ သစ်ခုတ်သော သူရှစ်သောင်း၊ ကြည့်ရှုစီရင်ရသောသူ သုံးထောင်ခြောက်ရာတို့ကို ခွဲခန့်ပြီးမှ၊
Men Jøderne sagde: Lastdragernes Kræfter svigter, og Grusdyngerne er for store; vi kan ikke bygge på Muren!
ယုဒလူ အချို့ကလည်း၊ ဝန်ထမ်းသော သူတို့ သည် အားကုန်ကြပြီ။ အမှိုက်များလှ၏။ မြို့ရိုးပြီးစီး အောင် မတတ်နိုင်ကြဟု ဆိုကြ၏။
Og Leviterne havde Tilsyn med Lastdragerne og ledede alle dem, der havde med de forskellige Arbejder at gøre. Og af Leviterne var nogle Skrivere, Fogeder og Dørvogtere.
ထိုသူတို့သည် ဝန်ထမ်းသောသူမှစ၍၊ အလုပ် မျိုးကို လုပ်ဆောင်သော သူအပေါင်းတို့ကို ကြည့်ရှု အုပ်ချုပ်ကြ၏။ လေဝိသားအချို့တို့သည်လည်း စာရေး၊ တရားသူကြီး၊ တံခါးစောင့်လုပ်ကြ၏။
der byggede på Muren. Også Lastdragerne var væbnet; med den ene Hånd arbejdede de, og med den anden.holdt de Spydet;
မြို့ရိုးတည်သောသူ၊ ဝန်ထမ်းသောသူ၊ ဝန်ကို တင်သောသူအပေါင်းတို့သည် လက်တဘက်နှင့် လုပ်ကြ ၏။ လက်တဘက်နှင့် လက်နက်ကိုကိုင်ကြ၏။
长辈 (Chinese (Simplified)>Malay)i love you too (English>Shona)gangstere (Danish>French)nostro (Latin>Russian)innovatsioonipoliitikat (Estonian>Swedish)knowledge (English>Italian)i can't handle this anymore (English>Tagalog)almost (English>Afrikaans)контртеррористическим (Russian>English)predstavnicima (Serbian>Turkish)naiwan ko sa bahay (Tagalog>English)inhalationsdamp (Danish>Spanish)exire (Latin>English)bezdrátová (Czech>Swedish)stenstøtterne (Danish>Latin)sorry i will not bother you again (English>Hindi)thickend sauce (English>Tagalog)spilleområdet (Danish>Swedish)compadeceu (Portuguese>Hebrew)tum kya keh rahe ho (Hindi>English)resterende (Danish>Italian)ゲート輸送 (Japanese>French)unsama dai (Tagalog>English)ｚｎ (Japanese>English)seiffert (English>French)